Ukugula kwe-Altitude, konke odinga ukukwazi ngaphambi kokuqeqeshwa mo - ULLER
Ukugula kwe-Altitude, konke odinga ukukwazi ngaphambi kokuqeqeshwa ezintabeni
Baningi abathandi bezintaba, abahamba ngazo, abakhwela kuzo, bazisebenzise njengendlela yabo yokuziqeqesha noma bamane nje bazijabulele ukuphefumula umoya wabo ungcoliswe yidolobha. Kodwa-ke, njenganoma yini enye, lo msebenzi kwesinye isikhathi uveza izingqinamba ezithile zomzimba nezempilo ezingakusibekela ukuzilibazisaikakhulukazi uma ungazi ukuthi ungazigwema kanjani noma ukubhekana nazo ngesikhathi.
Ukuze uthokozele umdlalo owuthandayo ngaphandle kokuphazamiseka, sethula umhlahlandlela oyisisekelo wezimpawu ongaziveza uma uhlangabezana ukugula kokuwa, noma kubizwe futhi, ukugula kwentaba.Sikunikeza amathiphu athile okuphatha ngendlela engcono kakhulu ngaphandle kokuphazanyiswa komsebenzi wakho.
Kwaziwa kakhulu ukuthi ukuqeqeshwa ezindaweni eziphakeme kakhulu akuwona umsebenzi wabadlali bezemidlalo nabesifazane. i-montaña, yize kuyibo ikakhulukazi abasebenzisa lesi simo njengezindlela zabo. Ezinye izinhlobo zabasubathi ziyayenza ukuze zithole imiphumela engcono, ikakhulukazi emiqhudelwaneni yesikhathi eside, ngoba kukhonjisiwe ukuthi ukuqeqeshwa ngale ndlela kuletha izinzuzo eziningi kumsubathi.
Kwenzekani emzimbeni wethu lapho uziqeqesha ngaphezu kwamamitha angama-2400 ukuphakama?
Ukuqeqeshwa endaweni ephakeme kakhulu kusho ukuthi kuzoba khona ingcindezi encane yomkhathi futhi nalokhu kugxila kwe umoya-mpiloesinayo emzimbeni wethu ngokuguqula inani le-oxygen esinayo.
Ngalesi sizathu kuvame kakhulu ukuthi uma sisezindaweni eziphakeme umzimba wethu ungathola imizwa nezimpawu ezingaziwa nezicasulayo:
Incrise of frecuency yenhliziyo.
Khulisa ukuphefumula ngomzuzu, njengoba kuqala kwethu kuzoba ukumunca umoya-mpilo omningi.
Khulisa i-erythroproietin noma i-EPO, i-hormone ebhekele ukukhiqiza amangqamuzana abomvu egazi, ngoba, lapho amangqamuzana egazi abomvu eningi, i-oxygen eyengeziwe.
Njengomphumela walokhu, ukukhiqiza umoya-mpilo omningi, lapho ubuyela ebangeni elijwayelekile, ukusebenza komsubathi kuzoba ngaphezulu kakhulu.
Kepha ungazethembi, ongoti bakhombisa ukuthi lolu hlobo lokuqeqeshwa, olubizwa nangokuthi ukuqeqeshwa ngaphansi kwezimo ze-hypoxic, Kuqala ukusebenza ngemuva kwezinsuku ezinhlanu noma eziyisikhombisa, ngoba kulapho umzimba uzoqala ukukhiqiza inani elikhulu le-EPO. Kufanele ungaguquguquki kulolu hlobo lokuqeqeshwa uma ufuna ukuthola ukuthuthuka kwangempela ekubekezeleni kwakho.
Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi lolu qeqesho luzonikeza kuphela imiphumela oyilindele inqobo nje uma uyenza ezindaweni eziphakeme eziphakathi kwamamitha ayi-2000 kanye nama-2600, ngenkathi ochwepheshe beluleka ngokuphelele ngokungadluli kumamitha ayi-3000 ukuphakama, indawo edume ngokuthi indawo. okuyingozi.
Kodwa-ke, konke esikubalulile ngenhla kubhekisa kuqeqesho lokuzithandela olwenziwa ukukhulisa amakhono ezemidlalo omuntu siqu nokwenza umsebenzi ongcono maqondana nokwehla intaba nokubuyela ekuqeqeshweni okujwayelekile, kepha senzani uma singakwenzi lokho ngabe lokhu kuqeqeshwa kuthuthukisa ezemidlalo yethu, kepha ingabe kuyimidlalo uqobo?
Emikhakheni efana ne ski, lo ekhuphukanoma i Umzila uyagijimaUkuziqeqesha ezintabeni eziphakeme akuyona inketho, kepha kuyisibopho, ngakho-ke kujwayelekile kakhulu ukuthi abasubathi bahlale behlushwa imiphumela yalesi sifo.
Ukugula kwentabaAkuvamile ukuthi ukuhlala ezindaweni eziphakeme ezithile kufushane, kepha kuqala ukuqaphela lapho ukuhlala endaweni kukude, yingakho labo abenza i-ski bengavamisile ukugula ngenxa yalesi sifo, ngenkathi kubagijimi ukushushuluza ezintabeni o ukuwela kubukeka kakhulu.
Sithi ukwenza le midlalo kuqinisekisa ngezinga elikhulu ukuhlupheka kokuphakama ngoba kusuka kumamitha ayi-2400 ukuphakama lapho umzimba namandla aphelele eqala ukwehla kancane, kepha-ke, akukabi bude obudala ingozi enkulu kakhulu .
Ngaphezu kohlobo lwemidlalo ozoyenza, isimo sakho somzimba sizophinde sithonye nakwelinye izinga. Ekuphakameni kwamamitha ayi-2400, abanye abantu bazothatha usuku noma ezimbili ukuzivumelanisa, kanti abanye kungathatha izinsuku ezinhlanu ukuzivumelanisa.
Amathiphu okugwemaUkugula okuphezulu oIntaba
Ukwenza usuku lwakho lwezemidlalo lube lula nokuthi ukugula okuphezulu kubekezeleleke ngangokunokwenzeka, siphakamisa uchungechunge lwamathiphu okufanele uwalandele ukuze ukwazi ukukhuphuka intaba ngendlela engcono kakhulu.
Kubalulekile ukuthi uphuze amanzi njalo futhi ungalindi ukoma, ngoba kulezo zindawo eziphakeme nangamazinga okushisa ongawahlangabezana nawo kungenzeka ukuthi ngeke wome uze uzwe ukuphelelwa amandla kwamanzi. Kungakuhle ukuthi uphuze amalitha amanzi aphakathi kuka-4 no-5 ngosuku.
Ngaphezu kwakho konke, uma ungasetshenziswanga kakhulu kuleli qophelo futhi uqala kwezemidlalo zalesi sitayela, ulinganise umfutho nobude bomsebenzi wakho ngakho-ke uzoziqeqesha ngendlela esebenza kahle kakhulu futhi ngaphandle kokuthatha izingozi ezingadingekile. Khumbula, iRoma alizange lakhiwe ngosuku!
Ukudla yebo, kepha njalo ngendlela yokuqikelela. Gwema ukudla okunomsoco futhi okunzima ukugaya ukudla; Ukudla okulula kuzosiza ekugayeni ukudla futhi ngeke ubeke engcupheni ubuhlakani bakho.
Ungalokothi ukhohlwe ukusebenzisa i-sunscreen, ikakhulukazi ebusweni nasezindebeni ngoba ukubanda kusha ngendlela efanayo ngoba ukuzivocavoca ngaphandle kungaholela ezinkingeni ezinkulu zesikhumba njengoba kukhonjisiwe ezifundweni ezahlukahlukene njengalezo ezenziwa yiGeneral Hospital San Jorge de Huesca , okuqinisekisa ukuthi ama-45% wabasubathi bezintaba eziphakeme bahlushwa ukushiswa yilanga. Qiniseka ukuthi ukuvikelwa yi-SPF 50+ ubuncane.
Ukwenza umsebenzi wakho kubalulekile ukuthi futhi usebenzise imaski noma izibuko zokushushuluza ezinjenge imaskingamalensi we-photochromic noma ngelensi kazibuthe engashintshana ongayithola ku-Uller.
Isigqoko sizoba umlingani wakho omuhle kakhulu ekusebenzeni kwakho kwezemidlalo. Ukugcina ikhanda lakho lifudumele kubalulekile ukuze ungatholi izinhlungu ezibandayo nokuthi ukugula okuphezulu kungakuthinti ngokweqile.
Gwema izimo ezicindezelayo ukugcina i isilinganiso senhliziyo nokuphefumula. Kubalulekile ukuthi uzame ukuhlala uzolile futhi ugxile emsebenzini owenzayo.
Utshwala nogwayi kudangele ngokuphelele ngalo msebenzi. Kubalulekile ukuba negazi elinomoya-mpilo eliningi, khumbula ukuthi uzohlangabezana nokushoda komoya-mpilo okunamandla kakhulu.
Ungahambi wedwa lapho ulungiselela ukuqeqesha endaweni ephakeme ngaphezu kwamamitha ayi-2400 ngoba kulapho izimpawu ziqala ukuvela futhi ungadinga usizo, ikakhulukazi oluthola ezimeni zalolu hlobo.
Ngaphambi kokuba uqale inqubo yokuziqeqesha yalolu hlobo, thintana nodokotela wakho futhi uqiniseke ukuthi unesimo esifanelekile ngokomzimba nangokwempilo salolu hlobo lomthelela. Ukuqapha kanye nokuqapha izimpawu zakho ezibalulekile ngesikhathi somsebenzi walolu hlobo kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi impilo yakho ayiphatheki kabi ngokungadingekile.
Iziqongo eziphakeme kunazo zonke eSpain
Kutholakala ePyrenees, inokuphakama kwamamitha angama-3371. Indawo yayo ivame ukuba semqansweni ngakho-ke ukuba nemibono yokuqwala izintaba okuthuthukile kubalulekile.
Kuyisiqongo esiphakeme kunazo zonke ePyrenees ngamamitha angama-3404 futhi akunconyelwe abangenalwazi.
Etholakala eSierra Nevada, iyisiqongo sesibili esiphakeme kunazo zonke eSpain, kumamitha angama-3479. Kunconyelwa abagibeli bezintaba bezinga eliphakathi. Uma ulungiselela cishe izinyanga ezimbili noma ezintathu, uzokwazi ukukhuphuka ngamahora ayi-15; Uma ungenalwazi, kunconywa ukuthi uchithe ubusuku obubodwa ehostela bese wenza amamitha ayi-1500 asele ngosuku lwesibili.
Kutholakala eziQhingini zaseCanary futhi kungamamitha angama-3800 ukuphakama, kuyisiqongo esiphakeme kunazo zonke eSpain. Isigaba sokugcina siqala ngamamitha ayi-3500 XNUMX futhi sithatha amahora amabili kuya kwamathathu ukufika lapho.
Imibuzo ejwayelekile ngokugula okuphezulu noma ukugula kwezintaba
IHypoxia ibhekisa ebunzimeni obuthola emzimbeni ukujwayela izimo ezinzima njengokuncipha kwengcindezi yasemkhathini, okuvame ukubizwa ngokuthi ukugula kokuphakama.
Ziyini izimpawu zokugula okuphezulu?
Izimpawu kungaba ukuphathwa ikhanda, ukuqwasha, ukungathandi ukudla, isiyezi, isicanucanu, nokucasuka. Ezimweni ezinzima kakhulu, ukucindezeleka kokuphefumula, ukudideka, ngisho ne-coma kungenzeka.
Yini ongayenza ngokugula okuphezulu?
Ukugwema ukugula kokuphakama, kungcono ukuhlala unamanzi ngokuphuza cishe amalitha ama-4 noma ama-5 wamanzi ngosuku nokugcina ukudla okuhlukahlukene okune-carbohydrate.
Ukugula okuphakama kungahlala isikhathi esingakanani?
Ukuzivumelanisa nokugula okuphezulu kungathatha izinsuku. Kodwa-ke, kuzohlala kuncike kumuntu nesimo sakhe somzimba ngaphambi kokwenyuka ngoba icala ngalinye lihlukile. Kunabantu abangathatha usuku noma ezimbili ukuzivumelanisa kanti abanye bangathatha ezinhlanu noma eziyisithupha.
Izigaba ezi-5 zokuhamba ngebhayisikili eYurophu
Yilabo kuphela abaqhuba ukuhamba ngebhayisikili abaziyo imfiva egijima emithanjeni yethu lapho sibheka imincintiswano ngamasekethe adinga kakhulu eYurophu. Yazi ukuthi yiziphi iZikhumbuzo zeCi
Imishini edingekayo yokwenza iFreeride Skiing
Umdlalo ongenamithetho? Kungahle kube nenkululeko ethile ekushushuluzeni kwe-freeride, kepha khumbula ukuthi lapho inkululeko iba nkulu, umthwalo uyanda. Landela iseluleko esikufundisa sona
Amathiphu wokuqalisa ngebhayisikili le-Enduro MTB
Uyazi ukuthi livela kuphi igama elithi Enduro? ukubekezela, okusho ukuthi ngesiNgisi ukumelana. Futhi ukuthi le ndlela ye-MBT, idinga ukumelana, isivinini futhi nenkululeko. Esihlokweni sethu
I-Ironman enzima kunazo zonke emhlabeni
Izinselelo kanye nokukwazi komuntu ukuzinqoba. Ungacabanga ukwenza amakhilomitha angama-226 phakathi kokugijima, ukubhukuda nokuhamba ngebhayisikili, ngaphansi kwamahora ayi-17? Kunabantu abakhulu, futhi laba ngabalingisi abaphambili be-
Ibhayisikili nekhamera yevidiyo ukufika enkanjini yase-Everest.
Khuphuka i-Everest Base Camp ngebhayisikili, akunakwenzeka? Kuhle lokho kuzwakala kuhlanya, abasubathi abanayo imikhawulo! Futhi yebo, le yindaba yezenzo ezinhle kakhulu zika-Omar Di Felice a
Qeqesha ingqondo yakho ukugijima
Uzizwe uthulisa lelozwi elincane ekhanda lakho, lapho usuzoqeda isekethe lakho elijwayelekile, futhi lapho ungekho, ufuna ukuma, uzizwe sengathi usukhathele futhi ngokuzumayo wena
Thola ukubaluleka kokugqoka izibuko zelanga zemidlalo!
Wonke umdlali onekhono kufanele afake izibuko zezemidlalo ezintweni zabo eziyisisekelo, ngoba ziyinto esemqoka yokuvikela amehlo ekushayweni noma emisebeni yelanga. Kepha izibuko zelanga zezemidlalo
Thola izinto eziyi-10 obungazi nge-Windsurfing!
IWindsurfing ngumdlalo ogcwele izimfihlo kanye nokufuna ukwazi ongathanda ukukuthola. Okulandelayo, sizokutshela ngokhokho balo mkhuba, ngamabala ongaphuthelwa uma uthanda